Dawlada Denmark Oo Ka Hadashay Qorshe Lagu Tayaynayo Suuq-geynta Iyo Caafimaadka Xoolaha Somaliland |
Dawlada Denmark Oo Ka Hadashay Qorshe Lagu Tayaynayo Suuq-geynta Iyo Caafimaadka Xoolaha Somaliland
Dawlada Denmarka ayaa warbixin ay soo saartay kaga hadashay barnaamij ay ku maalgalinayso guud ahaan tayaynta iyo horumarinta xoolaha Somaliland iyo somaliya.
Waxaana barnaamijkani ka koobaan doonaa dhawr qaybood oo ay kamid tahay in la helo aqoon dhinaca dhakhaatiirta xoolaha iyo xoojinta caafimaadka xoolaha iyo wax soo saarkooda sida subag,caanaha iyo haraga xoolaha ee la dhoofiyo in suuqyo ku filan loo helo.
Wasaarada arimaha dibada dalka Denmark ayaa warbixin ay soo saartay todobaadkan waxa lagu daabacay barnaamij ay ciwaan uga dhigtay “Bixinta barnaamijka maalgalinta xirfadaha waxbarashada iyo aqoonta ee xoolaha guud ahaan somalida ee 2016-2018”.
Waxaana qaybo badan oo muhiim ah lagaga hadlay xoolaha kala duwan ee Somaliland iyo dugsiga culuumta caafimaadka xoolaha laagu barto ee Sheekh Technical Veterinary School iyo meelo badan oo kale oo qaarkood ay xoolaha Somaliland mashaariicda ka maalgaliso dawlada Danishku, iyada oo sidoo kale warbixinta fariin talooyin ah lagu soo jeediyay xukumadda Somaliland inay kobcin iyo horumarinta dhinaca waaxda wax soo saarka xoolahooda ku saabsan hirgaliyaan.
Warbixinta uu soo saartay wasaarada arimaha dibada ee dalka Danesh-ku lagagana hadlay horumarinta xoolaha Somaliland iyo somalida kale waxay u dhignayd sidan.
Wasaarada arimaha dibada ee dalka Denmark oo kaashanaysa qunsuliyada ay ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay idinku soo gudbinaysaa baaqeeda codsiga ah ,kaas oo ah mid la xidhiidha helitaanka iyo bixinta barnaamij curdin ah adeegyada maalgelinta ee tayeynta aqoonta xoolaha iyo xirfada aqoontooda oo barnaamijyo toos ah oo ay somalida siinayso dawlada Denishku sanadaha 2016-2018.
Barnaamijkan tooska ah waxa lagu deeqay oo lagu maalgalinayaa horumarinta xoolaha ee waaxda xoolaha somalida kala duwan iyada oo ugu horeyn laga bilaabayo barnaamijkan jamhuriyada Somaliland iyo maamulka Puntland,waxaana marka hore lagu horumarinayaa beeralayda iyada oo la isticmaalayo aqoonta laga helayo clmi baadhis lagu sameeyey xoolo dhaqatada somalida oo dhanka go’aan qaadashada ku salaysan, iyo qodobka labaad ee barnaamijkan oo ah in lagu xidho dhinaca dawliga ama waaxda gaarka loo leeyaha si loo horumariyo wax soo saarka xoolaha,suuqgeyntooda iyo ilaalintoodaba.
Hadii aynu si gaar ah ujeedada barnaamijkan laga leeyahay waxa weeye in lagu taageero shuruucda uga yaala somalida horumarinta iyo sugnaanshaha nidaamka horumarinta iyo maamulitaanka ee xoolahooda,dhismaha awooda aqoonta xoolaha iyo horumarinta xuquuqda xoolaha ee suuqyada iyo macluumaadka la xidhiiidha,iyada oo taa lagu xidhayo inkaaniyaadkii caadiga ahaa ee dawladnimadu harumarinta xolaha ugu tala gashay.
Waxa jirta in horeba dalk Denmarka u taageeri jirtay waaxda xoolaha ee hawlgalayaasha somalida ee hada jira oo ay maalgalintiisa Danish-ku fuliso oo usii maraysa hay’adaha iyo ururada horumarinta ee wakhtigan Denmark wada shaqaynta leeyihiin, waxaana guushsa la wada jecel yahay in laga wada gaadho arintana wali tartanka ku jirta waxay dhisi doontaa koboca shaqo kaste oo la gaadhi doono.
Macnaha laga leeyahay in hawlgalinta barnaamijkan in laga gaaadho hirgalintiisa waxa uu ujeedooyinka haddafyadan soo socda?
In lagu tageero waaxda soo saarka xoolaha oo ah ka darawaliya guud ahaan dhaqaalaha muxaliga gobol iyo qaran ahaanba (Bulshooyinka Somaliland iyo somaliya) ku nool xooluhuna waa laf dhabarta ugu muhiimsan ee shaqada iyo dakhliga qoyska.
Sida balaadhinta qiimaha dakhliga iyo shaqo ee waaxda xoolaha
Dawladaha iyo beelaha ayaa ka codsaday taageero dheeraad ah oo xaga ahwlaha xoolaha diirada lagu saarayowax ka qabashada baahida kuwaasi oo ka qayb qaadan doonta yareynta saboolnimada iyo koboca joogtaysan.
Kobcinta tayada ee dawliga ah iyo shirkadaha saamileyda aan dawliga ahayn in laga taageero waaxda aqoonta,siyaasada iyo hirgalinta heerarka (Nadaafada xoolaha iyo waxii la mid ah) iyo arimaha sharciga,guusha lagu wada qanci karana waxa la rajaynayaa in la gaadho sida ay calaamadaha muuqda ee kasoo baxaya horumarka ina tusayaan kuwaas oo ah kuwo si xoogan inoo dhiirgalinaya.
In la horumariyo awooda iy tayadda ardayda dugsiga waxbarashada aqoonta xoolaha ee Sheekh Technical Veteniray School ee ay gacanta ku hayso urur goboleedka IGAD.
In si qoto dheer oo aqoon iyo ficilba ku jiro layskaga kaashado dhanka iskuulada la sameeyo cilmi baadhisyo ku saabsan dhanka isbedelka cimiladda (Dhulalka somalildan iyo Somalia) iyo saameynteeda dhinacyada xoolaha ee beeraha,midhaha,iyo wax soo saarka dhulka iyo khayraadka dibiiciga ah.